Maareeye yaasha Senterada Degmada Qalaafe Oo Tababar Loo Qabtay - Cakaara News
Maareeye yaasha Senterada Degmada Qalaafe Oo Tababar Loo Qabtay
Qalaafe (Cakaaranews)Talaado 14ka March 2017. Tababar uu soo agaasimay xafiiska maamulka shaqaalaha CPA ee Degmada qalaafe islamarkaana ay kasooqaybgaleen Kabinetka Degmada qalaafe, loona hayay maareyayaasha Centerada/tuulooyinka hoosyimaada degmada qalaafe ee Gobolka shabeele ayaa si habsamileh loogu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee isla degmada.
Hadaba, tababarkan ayaa waxaa kahadlay Kusimaha Madaxa Xafiiska Maamulka Shaqaalaha (CPA) ee Degmada qalaafe mudane Mahad Igbaar Xudur oo sheegay in tababarkani ujeedaiisu tahay mid kor loogu qaadayo garaadka aqoomeed ee maareyayaasha centerada hoosyimaada degmada qalaafe. Wuxuuna xusay in tabaarkani yahay mid ay maareyaashu kubaranayaan casharo ku qotama xidhmoooyinka maamulka suuban (Good Governance Packages). Wuxuuna tilmaamay in tababarkan fulintiisa ay gacanwayn kagaysteen maaulka degmadu oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmada qalaafe mudane Maxamed Khadar Faarax.
Dhankooda xubno kamid ah kabineetka degmada qalaafe oo kasooqaybgalay gabagabadii tababarka ayaa maareeyayaasha u soojeediyay khudbado kaladuwan oo kahadlaya shuruucda maamulka suuban iyo ilaalinta saraynta sharciga Iyo kaydinta iyo xafidida documentiyada cenetrada, Ilaalinta iyo daryeelka goobaha adeeg-bixinta ee kuyaala degmada sida biyaha, caafimaadka, beeraha iyo waxbarashada. Waxayna carabka kudhfteen in warbixinada ceneterada ay wakhtigiisa soo diraan.
Ugudanbayna, dhankooda maareyayaashii tababarka kasooqaybgalay ayaa sheegay in tababarkani ahaa mid faaiido wayn ay kafaa’iideen islamarkaana ay kubarteen casharo laxidhiidha xidhmooyinka maamulka suuban. Waxayna xuseen in kadib mrkii ay kulaabtaan cenetaradii ay ficil kumuujinayaan casharadii ay barteen.